Waa maxay Couchsurfing - Hab aad faa'iido ugu leh safarka | Safarka Absolut
El Couchsurfing mid ka mid ah isbeddellada waaweyn ee in muddo ah socday. Maaddaama haddii aad jeceshahay inaad ku safarto adduunka oo dhan, had iyo jeer way wanaagsan tahay inaad tixgeliso. Sababtoo ah inaan lacag badan ku qarashgareyno hoyga, badanaa waxay naga dhigeysaa inaan labo jeer ka fikirno xirxirida boorsooyinkeena.
Marka, qiyaas ahaan waxaan dhihi karnaa Couchsurfing waa heli karaan hoy bilaash ah meel kasta oo adduunka ah. Dabcan, sida waxkasta oo nolosha ka mid ah, marwalba waa inaad isku daydaa inaad wax yar ka baarto maadada oo aad waxbadan ka barato, si aanad ula yaabin. Diyaar ayaad tahay ?.
1 Waa maxay fuulitaanka sariirta
2 Sidee Couchsurfing u shaqeeyaa
3 Kooxaha Couchsurfing
4 Tabaha tixgelinta la siinayo
Waa shabakad safar online ah, halkaas oo ay ku kulmaan dhammaan dadka jecel safarka. Ujeeddadeedu waa in laga caawiyo socdaalka inuu helo hoy bilaash ah. Sidaa awgeed, haddii aan u turjunno magaca 'Couchsurfing' macno ahaan, waxaan u sameyn doonnaa sidii 'raadinta fadhiga'. Taasi waa, meel aad seexan karto. Marka waxaan wajahaynaa shabakad ay qaar is caawiyaan maxaa yeelay dhinac dhinac socotada ah wuxuu helayaa meel uu ku nasto iyo dhanka kale, wuxuu sidoo kale baran doonaa dadka iyo caadooyinka goobta, aragti kale. Wax aan dhici doonin haddii aan u safrayno qaab caadi ah. Marka la soo koobo, waa nidaam lagu helo hoy bilaash ah iyo isweydaarsi dhaqameed.
In ka badan maxaa yeelay markay martidu gurigaaga yimaadaan, waa inaad udhaqantaa sida martida wanaagsan. Hagaag, kiiskan waa isku mid. Dadka imanaya waxay u baahan yihiin meel ay seexdaan oo ay ku nastaan Laakiin sidoo kale waxa ugu caansan waa inay sidoo kale wadaagaan waaya-aragnimada, dhaqamada iyo inay iska caawiyaan wax kasta oo lagama maarmaan ah. Looma baahna martida inay had iyo jeer sameeyaan waxa uu martida amrayo laakiin martida loo yahay ayaa joogi doonta wakhti kasta si ay uga caawiso wax kasta oo loo baahdo
Sidee Couchsurfing u shaqeeyaa
Waxaan ka hadlaynaa helitaanka hoy bilaash ah, halkii aan ka dagi lahayn hoteello qaali ah. Laakiin tani maahan in si fudud loo sameeyo. Haddii aan horay u soo sheegnay shabakadda socdaalka, waa inaan booqo couchsurfing.com halkaasna ka abuur muuqaalkeenna. Kaliya sidan ayaan ku gali doonnaa bulshada oo waxaan awood u yeelan doonnaa inaan wax ku raadinno hadba baahidayada. Markaad gudaha gasho waa inaad buuxisaa waa maxay qaybta macluumaadka guud. Sidan oo kale, waxay noqon doontaa xogtaada shakhsi ahaaneed iyo qayb labaad oo leh xogta ku saabsan shuruudaha ay bixiyaan marka la eego qolka. Taasi waa, haddii ay tahay qol gaar ah ama hadday tahay sariir fadhiga, iwm. Sidan oo kale, markaad raadineyso macluumaad waxaad heli doontaa wax kasta oo aad u baahan tahay ka hor intaadan qaadin tallaabada sameynta boos celinta. Waxa kale oo jira qayb ku saabsan dhadhanka shakhsi ahaaneed, oo aan waxyeello u geysanaynin akhrinta, si loo ogaado waxa aad heli doontid.
Markuu astaantaadu dhammaato oo ay la socoto sawirro, kalsooni weyn oo ku aaddan isticmaalayaasha, waxaad awoodi doontaa inaad marto oo aad raadiso waxaad u baahan tahay. Waxaad ka raadin kartaa magaalooyinka oo booqan kartaa astaamaha muuqda. Markuu jiro mid ku habboon danahaaga waa inaad u qortaa isaga. Xusuusnow inaad faallo ka bixiso inta aad ku sugnaan doonto magaaladaas, sababta booqashadaada iyo waxa aad rabto inaad booqato ama aad soo ogaato. Waa in la caddeeyaa in shabakaddan dhexdeeda uusan qof walba ahayn kan raadinaya fadhiga lagu seexdo. Astaamaha qaarkood maahan kuwa socdaal laakiin waa kuwa 'martigeliyeyaasha' taas oo ah, yaa ka taga fadhiga ama qolka si loogu martigaliyo martida. Dhinaca kale, waxa kale oo jira waxa loogu yeero 'Kafee ama Cabitaan', oo xaaladdan aan qolal lahayn laakiin ka caawin kara dadka safarka ah inay magaalada bartaan oo ay ka siiyaan talo ku saabsan waxa ay booqanayaan. Sidaad arki karto, waxaa jira dhowr astaamo oo aan heli karno dhammaantoodna waxay kaa caawin doonaan safarkaaga.
Gudaha webka waxaad ku arki doontaa in sidoo kale uu jiro a taxane kooxeed. Tani waa in dadka isku meel ka soo jeeda loo abaabulay inay qabtaan hawlo kala duwan. Si aad ula kulanto dadka aad isla wadaagtaan hiwaayadahaaga kuwaas oo ku caawin kara markaad ka fiirsato mid kasta oo ka mid ah qodobbada la calaamadeeyay. Mararka qaarkood waxay sameystaan ​​joogitaanno si ay ula kulmaan oo ay u yeeshaan saaxiibo cusub ama qorshooyinka safarka. Waa fikrad aad u wanaagsan in la caawiyo dhammaan socotada imanaya iyo kuwa aan aqoon meesha.
Hadda waad ogtahay sida mawduuca Couchsurfing u shaqeeyo. Sidaa darteed, haddii aad go'aansatay inaad qaaddo tallaabada ugu horreysa, had iyo jeer xusuusnow inaad sifiican u aqriso dhammaan astaamaha codsiyada. La joog iyaga iyaga oo leh dhammaan macluumaadka oo dhammaystiran, sawirrada iyo faallooyinka wanaagsan ee adeegsadayaasha kale. Markaad go aansato, waa inaad ka soo muuqataa gurigaaga qoob-ka-ciyaarka adigoo hadiyad u siinaya faahfaahinta uu ku martigelin doono oo uu ku tusi doono geesaha magaaladiisa. Intaas waxaa sii dheer, arinta cuntada waa inaan iska bixinaa nafteena maxaa yeelay waxaa nalagu casuumay oo kaliya inaan seexanno oo aan isticmaalno qolka la heli karo, ka faa'iideysan mayno intaas ka sii badan. Waxa ugu badan ee lagula taliyo waa inaad joogtaa ugu badnaan 3 maalmood si aysan u cuslaanin.
Waxaa jira dad badan oo aan u arkin inay tahay mid amaan ah, laakiin waa in la yiraahdaa xaaladdan, fikradaha iyo waayo-aragnimada ugu badan waxay si kale u tilmaamayaan. Waa run inaan wax walba heli karno, laakiin taasi waa sababta ay u wanaagsan tahay in si wanaagsan loo raadiyo oo aan lagu qaadin astaanta koowaad ee aan aragno. Mid kale oo ka mid ah su'aalaha ugu caansan ayaa ah mid sidoo kale waa inuu sii joogaa ka dib markii uu ku sugnaa guriga qof kale. Hagaag, maya, qasab maahan, waxaad had iyo jeer wax ku darsan kartaa si kale, sidaan horay u soo sheegnay hage magaalo ama si fudud dhinacyada kale. Waxaas oo dhami waxay kaa dhigayaan inaad la kulanto meelo cusub, dad waaweyn oo aad la wadaagto waayo-aragnimo wax ku ool ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Waa maxay fuulitaanka sariirta
Qalcadihii ugu quruxda badnaa Spain